Yakatumirwa ne Tranquillus | Nyamavhuvhu 24, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kuguma kwetsamba: 5 tsika dzakanaka dzinofanirwa kurambidzwa chero zvodii
Kupera kwe tsamba nyanzvi inogona kukanganisa uye kuita isingabve pamakoni akagadzwa nehunyanzvi hwekunyorerana. Iyi nhanho ndechimwe chezvinhu izvo zvisingafanirwe kuregeredzwa, nekuti zvinoenderana nezviito zvekutora paemail yako. Kusarudza magumo akakodzera emutongo weemail kunoda kugona izvo izvo zvinofanirwa kudzivirirwa chero zvodii. Maneja, muzvinabhizimusi kana mushandi, iwe pasina mubvunzo unofanirwa kuvandudza hunyanzvi hwako hwekunyorerana. Muchikamu chino, tsvaga mafomula mashanu ane rukudzo ayo asingafanire kuoneka muemail yako.
“Usazeze ku…”: Isingakoke mutsara unoremekedza
Mutsara wakadzikama uyu haukoke nekuti unoreva kunyara. Kupfuura izvozvo, "Usazeze ku ..." iri a mazwi asina kunaka. Nekudaro, zvingave, mumaonero evamwe nyanzvi dzemitauro, zvisinganyanye kukurudzira kuita. Zvakaipisisa, zvinokonzeresa chiitiko chinodzosera kumashure, zvinopesana nezvatinotarisira.
Fomura yakakodzera kwazvo ndeiyi: "Ziva kuti iwe unogona kusvika kwandiri ..." kana "Ndidane kana zvichidikanwa". Zviripachena, sezvaungave wakanzwisisa, izvo zvakakosha zvichiri kufarirwa.
"Ndinovimba kuti ..." kana "Nekutarisira kuti ...": Fomura zvakare sentimentalist
Mumashoko enyanzvi dzinoverengeka mukodhi yekutaurirana yemakambani, "hatisisina tariro yechinhu chiri kushanda nhasi". Asi, iwe unofanirwa kusarudza kumwe kutaura kwekusimbisa kwekuremekedza, kwakadai sekuti "Ndinoshuva".
"Nokusara paunogona ...": Ruremekedzo zvakare kuzviisa pasi
Iyi fomula ine ruremekedzo inoratidzwa nekutumira kwakanyanyisa. Chokwadi, ndiani anoti "Ruremekedzo" hazvireve kuti "Kuzviisa" kana "Cachotterie". Chiitiko chakaratidzawo kuti kurongeka kwakadai kune zvakati wandei pane wako interlocutor.
Semuenzaniso, iwe unogona kuti: "Ndiri kukuteerera" kana "Ndakamirira mhinduro yako". Ndiwo matauriro ane hunyoro ayo ari kubata zvakanyanya.
"Maita basa ..." kana "Ndatenda pamberi pekupindura ...": Fomula ine chivimbo kwazvo
Pano zvakare, iyi fomati yakaratidza miganho yayo. Icho chinoreva kuzvivimba kwakanyanya. Uye zvakare, zvakajairika ndezvekuti isu tinopa kutenda kwezviito zvakapfuura.
Semuenzaniso, iwe unogona kuti: "Ndiri kuvimba nemhinduro yako zvakanakira ..." kana taura zvakananga zvaunotarisira kubva kumunyori wako.
"Ndapota…": Pane mazwi anorema
Mutsara uneruremekedzo "ndinokukumbira kuti ufadze" une zvese zvirevo zvekutungamira. Kunze kwekuti mune yehunyanzvi email, iyo tsika ndeyekumhanya. Hatifaniri kuita nemitemo yakaoma kwazvo yekutonga.
Asi ndeapi mafomula anofanirwa kufarirwa ipapo?
Zvimwe zvirevo zvine hunhu zvekushandisa
Kune akawanda maitiro ane hunhu anofanirwa kufarirwa. Mumwe anogona kudzokorora pakati peaya mafomati erudzi: "Zuva rakanaka", "Kwazisai Kwakakurumbira", "Kwaziso dzepachokwadi", "Kwaziso dzeCordial" kana kunyangwe "Nendangariro dzangu dzakanakisa".
Sarudza magumo akakodzera emutsara weemail, asi unoita sei nezvazvo? Gumiguru 15th, 2021Tranquillus
pashurePazera ripi raunofanira kudzidza mutauro wekunze? Vakuru vanopupura!
zvinoteveraPolite mafomula pakupera kweiyo email mune yakasarudzika mamiriro